एशियाली टिक tabby - राम्रो-हुनुको एउटा प्रतीक
एशियाली बिरालो जातिहरु संसारमा धेरै लोकप्रिय छन्। आँखा Slanting, जापानी गीशा र र्नतकी उडान gait को शान तिनीहरूलाई धेरै आकर्षक प्राणीहरू बनाउँछ। त्यसैले निरन्तर अझ परिष्कृत र मनोरम जनावर को हटाउनका लागि लगातार चयन काम भइरहेको। पछिल्लो शताब्दीको 80-एँ यो चयन को परिणाम देखा पर्नुभयो र एशियाली ticked tabby रूपमा। तुरुन्तै लोकप्रियता बिरालोहरु को प्रशंसक बीच सबै भन्दा संगठनहरूले, विशेष, 1990 मा प्राप्त र feline पहिचान गरिएको छ WCF प्रकार।
आनुवंशिक सामाग्री को लागि आधार सेवा Burmillas। : पछि घरेलू बिरालोहरु अन्य एशियाली shorthaired जातिहरु द्वारा सामेल फारसी चिनचिला, Abyssinia, र अन्य। ठोस, Sepia, चाँदी, भेट्यो, tabby, बाघ, tics: क्रस-प्रजनन को फलस्वरूप विभिन्न tabby ढाँचाको हुन सक्छ। जनावर फर को मुख्य रंग पनि फरक हुन सक्छ: खूबानी, क्रीम, नीलो, कर्मेल, बैजनी, लाल रंग, कालो र चकलेट।
बीचमा अन्य एशियाली tabby टिक एक विशेष ठाउँ ओगटेको छ। यो बिरालो burmanskoy गर्न संविधान, फर बनावट पनि त्यस्तै छ तर फरक रू। सबै पूर्वीय जस्तै, यो अलिकति छड्के छ, बदाम आकारको आँखाले धेरै देखावटी सुनको आइरिस संग। मध्यम आकारको कान, एउटा सानो टाउको सिधै राखिएको गर्दै सुझावहरू अलिकति बाङ्गो र बदलिएका छन्। पछाडि भन्दा हल्का पेट। हिंद खुट्टा अक्सर गाढा मोजा मा "shod", र अगाडि मा त्यहाँ गाढा छल्ले छन्।
तर कुनै शरीर संरचना यस्तो अद्भुत नस्ल, रंग र छोटो र नरम फर बनाउँछ। एशियाली टिक, tabby, प्रत्येक ब्यालेन्स मा दुई गाढा चिह्न छ। आफ्नो फर stroked गर्दा यदि पशु झिल्काहरू हालिएको छ। यो प्रभाव लागि टिक नस्ल विशेष गरी मूल्यांकन गर्छन्। महिलाहरुको प्राथमिकता छन्। लागि grafted बिल्ली को बच्चा ब्रीडर को डलर को दसौं हजार सोध्न सक्छ! प्रतिष्ठा र समृद्धिको प्रतीक - त्यसैले, घर मा यस्तो जनावर छ।
महान साथै उपस्थिति एशियाली टिक tabby प्राप्त र बौद्धिक अक्षर। भोक र डाह को दृश्य, यदि घर त्यहाँ अर्को पशु हुँदा यसलाई पुकारा अनुरूप छैन। म साथ अन्य बिरालोहरु, कुकुर र पनि तोते राम्रोसँग प्राप्त। उहाँले खेल्न रुचि, तर यो अनुज्ञेय र निषेधित बीच सीमाना व्याख्या गर्न सजिलो छ। inveterate homebody - नस्ल को नै समय प्रतिनिधिहरु मा। तिनीहरूले दृश्यहरु, ठूलो चल्छ परिवर्तन मनपर्छ र सजिलो संग हस्तान्तरण अलग बिना छैन। सामान्यतया यस्तो बिरालो मात्र एक व्यक्ति बाँधिएको, तर अन्य घरेलू सदस्य मैत्री।
एशियाली टिक tabby कुनै undercoat छ। तसर्थ, यसको फर न्यूनतम हेरचाह। पर्याप्त molting समयमा उनको बाक्लो धातु कोर्नु comb। एक बिरालो सन्तुलित आहार आवश्यक छ। उनको सुक्खा खाना प्रस्ताव हुँदैन, र यो प्राकृतिक उत्पादनहरु प्राथमिकता दिन राम्रो छ। एकै समयमा हामी भिटामिन बारेमा भूल हुँदैन - बिरालोहरु लागि उनको घाँस किन्न। तपाईं हेरविचार लागि सबै सिफारिसहरू पालन र नियमित आफ्नो पाल्तु जनावर डाक्टर देखाउन भने उहाँले तपाईंलाई राम्रो स्वास्थ्य र दीर्घायु दिनेछु। यो नस्ल अझै आनुवंशिक रोग प्रकट छैन।
Siamese शैवाल - आफ्नो ट्यांक मा Mischievous ह्वेल!
नस्ल कुकुर अमेरिकी Cocker Spaniel: प्रकृति, हेरविचार र पोषण
द्रुत मद्दत पाल्तु जनावर - पेस्कोभ मा एक पशु चिकित्सा क्लिनिक
Akhal-Teke - संसारमा सबैभन्दा सुन्दर घोडाहरू
Siamese बिरालोहरु को प्रकृति
डिस्कस जलजीवालय माछा। डिस्कस माछा: विवरण, फोटो, र थुनामा को अवस्था
एक व्यापारी के हो र कसरी होनहार यो गतिविधि
ल्याक्टेमिया को रखरखाव को लागि नर्सिंग माम खाने को लागी यो सम्भव छ
1925 को Locarno सम्मेलन: मुख्य उद्देश्य सहभागीहरू, परिणाम। राइन सम्भ्कौता
जीवनी, उपलब्धिहरू र रोचक तथ्य: रीगा र सबै लाटविया अलेक्जेन्डर Kudryashov को महानगरीय
तपाईं पखाला भने के कसरी पखाला सामना गर्न र के
कोठा मा फर्नीचर कसरी व्यवस्था गर्न
जीवनी हेलेना Korikovoy। उचाइ र तौल Elena Korikovoy
झण्डा र Balashikha को काखमा को कोट: वर्णन, इतिहास, मूल्य
"सिट्रीन" चिकित्सा। प्रयोगको लागि निर्देशन
खमीर संग पातलो प्यानकेकहरू। व्यञ्जनहरु